Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda Ee Ay Qoreen Wargeysyada Ingariiska Saaka Oo Axad Ah. - Laacib.net
Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda Ee Ay Qoreen Wargeysyada Ingariiska Saaka Oo Axad Ah.
by Saed Balaleti | Sunday, Jun 18, 2017
Pep Guardiola ayaa doonaya inuu Manchester City kula midoobo daafaca midig Dani Alves laakiin tababaraha Etihad waxa uu sidoo kale doonayaa inuu la soo wareego daafac midig kale Kyle Walker.
Goolhayaha kooxda Liverpool Loris Karius ayaa waxaa dooneysa kooxda Jarmalka ee Augsburg.
Alex Oxlade-Chamberlain ayaa si aad ah uga careysan in Arsenal aysan wax qandaraas cusub u soo bandhigin, waxaana ay keeni kartaa inuu kooxda ka tago xagaagan.
Alexis Sanchez ayaa mushahar xad dhaaf ah oo kor u dhaafaya 21 milyan ginni sannadkii ka dalbaday Bayern Munich si uu ugu qasbo Arsenal inay heshiis la gaaraan kooxda Manchester City.
Arsenal ayaa ku dhow inay ku garaacdo kooxda Everton saxiixa xiddiga reer Norway Sander Berge iyagoo ku dalbanaya 18 milyan ginni.
Cristiano Ronaldo ayaa kaliya joogi doona Real Madrid haddii kooxda ay bixiso lacagta canshuurta ee loo heysto ee 13ka milyan ginni.
Manchester United ayaa ka baqeysa inay Chelsea ka afduubato saxiixa weeraryahanka Real Madrid Alvaro Morata iyagoo ku dalbanaya 70 milyan ginni.
Atletico Madrid ayaa isbuucaan gudbineysa dalab ay ku dooneyso inay ku soo ceshato weeraryahanka Chelsea Diego Costa inkastoo kooxda ay saaran tahay xayiraad suuqa kala iibsiga ah ilaa iyo bisha Janaayo.
Cristiano Ronaldo ayaa ku wargeliyay Sir Alex Ferguson baahida uu u qabo inuu ka tago Real Madrid lix isbuuc ka hor.
John Terry ayaa waxaa saxiixiisa ku dagaalamaya kooxaha Aston Villa iyo Birmingham City.
Real Madrid ayaa duldhigtay 350 milyan ginni madaxa Cristiano Ronaldo si ay meesha uga saaraan xiisaha PSG iyo Manchester United.
Tababaraha Tottenham Mauricio Pochettino ayaa dareenkiisa u weecin doona daafaca dhexe ee Manchester United Chris Smalling ka dib markii Leicester City u waayeen daafaca Harry Maguire.
Chelsea ayaa sii socodsiineysa wadahalada qandaraaska ee tababare Antonio Conte inkastoo qilaaf uu soo kala dhexgalay tababaraha iyo maamulka kooxda oo ku aadan istaraatiijiyadooda suuqa kala iibsiga.
Manchester City ayaa ku qasbanaan doonta inay siiso 500 kun ginni isbuucii seddexda ciyaaryahan ee Joe Hart, Samir Nasri iyo Wilfried Bony haddii aysan koox kale u helin xagaagan.
Tottenham ayaa diidan inay qiimo duldhigto xiddiga khadka dhexe Eric Dier inkastoo ay xiiseyneyso Manchester United.
Chelsea ayaa ogolaatay inay heshiis 16.6 milyan ginni uga iibiso Bertrand Traore kooxda Lyon ka dib markii uu wacdarro ka dhigay amaahdiisii Ajax ee xilli ciyaareedkii la soo dhaafay.
Everton ayaa soo cusbooneysiin doonta xiisaheeda xiddiga khadka dhexe ee Swansea ee lagu qiimeeyo 30 milyan ginni Gylfi Sigurdsson.
Leicester iyo West Brom ayaa ku dagaalami doona saxiixa daafaca dhexe ee Manchester United Chris Smalling
Mustaqbalka Cristiano Ronaldo waxaa lagu go’aansan doonaa kulan muhim ah oo dhexmaraya wakiilkiisa Jorge Mendes iyo madaxweynaha Real Madrid Florentino Perez.
Milkiilaha Chelsea Roman Abramovich ayaa doonaya heshiis la isku bedelanayo Cristiano Ronaldo iyo Eden Hazard.
Bayern Munich ayaa diyaar ah inay dhexda ka soo gasho heshiis uu daafaca midig ee Tottenham Kyle Walker ugu wareegayo Manchester City.
AC Milan ayaa u dhaqaaqeysa goolhaye Joe Hart si uu bedel ugu noqdo Gigi Donnarumma.
Luis Enrique ayaa u soo muuqday mid u sharaxan shaqada Chelsea haddii Antonio Conte uu ka tago.